အပူကျုံ့စက်ထုပ်စက်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - တရုတ်အပူကျုံ့ထုပ်ပိုးစက်ထုတ်လုပ်သူများ
ခေါင်းအုံး / Flow ထုပ်ပိုးစက်
Nespresso ကော်ဖီဆေးတောင့် ...
Kd-600 Heat Shrink Tunnel၊ POF Film Heat Shrink Packaging Machine
အလိုအလျောက်အပူကျုံ့ထုပ်ပိုးစက် (၃ Servo Motor Control System) ကုန်ပစ္စည်း၏ပုံရိပ် - အသုံးချမှုနယ်ပယ် - နှင်းများ၊ ဆီးကြိတ်၊ ဥများ၊ ပြင်သစ်ပေါင်မုန့်နှင့်ဘီစကစ်များကဲ့သို့သောတစ် ဦး ချင်းထုပ်ပိုးထားသောထုတ်ကုန်များကိုထုပ်ပိုးရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရိုးရှင်းသောညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထူးခြားချက်များ - ၁. ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတည်ဆောက်ပုံ၊ 2. ပထမတတိယမျိုးဆက်သုံးဆက်စက်မော်တာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးအိတ်ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
အလိုအလျောက်နို့လက်ဖက်ရည်ပူ Shrink Wrapper
အလိုအလျောက်အပူလျှော့ချနိုင်သောထုပ်ပိုးစက် (3 Servo Motors) ကုန်ပစ္စည်းပုံ - လျှောက်လွှာနယ်ပယ် - နှင်းများ၊ ကြက်ဥများ၊ ပြင်သစ်ပေါင်မုန့်နှင့်ဘီစကစ်များကဲ့သို့သောတစ် ဦး ချင်းစီထုပ်ပိုးထားသောထုတ်ကုန်များကိုထုပ်ပိုးရန်အတွက်သင့်လျော်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုရိုးရှင်းသောညှိနှိုင်းမှုဖြင့်အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထူးခြားချက်များ - 1. ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတည်ဆောက်ပုံ၊ တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု။ 2. ပထမတတိယမျိုးဆက်သုံး servo မော်တာကိုထိန်းချုပ်သည်။ အိတ်ကိုတပ်ဆင်။ ဖြတ်နိုင်သည်။
အလိုအလျောက်ခေါင်းလျှော်ရည်ပုလင်း၊ Ravioli၊ Yakult၊ Noodle Heat Shrink Packaging Machine
စက်မှုအစားအစာအစားအစာထုပ်ပိုးစက်ချောကလက်ဘား Candy Bar ထုပ်စက်
အလိုအလျောက်အပူကျုံ့ထုပ်ပိုးစက် (၃ Servo Motor Control System) ကုန်ပစ္စည်း၏ပုံရိပ် - အသုံးချမှုနယ်ပယ် - နှင်းများ၊ ဆီးကြိတ်၊ ဥများ၊ ပြင်သစ်ပေါင်မုန့်နှင့်ဘီစကစ်များကဲ့သို့သောတစ် ဦး ချင်းထုပ်ပိုးထားသောထုတ်ကုန်များကိုထုပ်ပိုးရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရိုးရှင်းသောညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထူးခြားချက်များ - ၁. ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတည်ဆောက်ပုံ၊ တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု။ 2. ပထမတတိယမျိုးဆက်သုံး servo မော်တာကိုထိန်းချုပ်သည်။ မလိုအပ်ပါ။
အလိုအလျောက် POF ​​ရုပ်ရှင်စီးကရက်ထုပ်ပိုးစက်စျေးနှုန်း
အချိုရည်ပုလင်းများအတွက် Shrinkable ထုပ်ပိုးစက်
အလိုအလျောက် Mineral Water Shrink Packing Machine
အလိုအလျောက်အပူလျှော့ချသည့်ထုပ်ပိုးစက် (၃ Servo မော်တာများကိုထိန်းချုပ်သည့်စနစ်) ကုန်ပစ္စည်း၏ပုံရိပ် - အသုံးချမှုနယ်ပယ် - နှင်းများ၊ ဆီးကြိတ်၊ ဥများ၊ ပြင်သစ်ပေါင်မုန့်နှင့်ဘီစကစ်များကဲ့သို့သောတစ် ဦး ချင်းထုပ်ပိုးထားသောထုတ်ကုန်များ၏ထုပ်ပိုးမှုအတွက်သင့်လျော်သည်။ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရိုးရှင်းသောညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထူးခြားချက်များ - ၁. ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတည်ဆောက်ပုံ၊ 2. ပထမတတိယမျိုးဆက်သုံး servo မော်တာကိုထိန်းချုပ်သည်။
ဘက်ထရီ၊ ဘီယာ၊ ဖဲကြိုးလုံးအတွက်အလိုအလျောက်အပူ Shink ထုပ်ပိုးစက်